अशोक दर्जी पछी अब कमला घिमिरेको पालो ! कसरी बस्न सफल भैन एका एक लाखौ नेपालीहरुको मन मुटुमा (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
अशोक दर्जी पछी अब कमला घिमिरेको पालो ! कसरी बस्न सफल भैन एका एक लाखौ नेपालीहरुको मन मुटुमा (भिडियो सहित)
ScotNepal September 8, 2019
आज भोली हामी चर्चा गर्दै छौ ११ बर्षिय बालिका ”दोहरी गायिका कमला घिमिरे” मै हु भन्ने गायक गायिकालाई समेत पछाडी पार्दै यिनी बालिका कमला घिमिरेले गाएको लाइभ दोहोरी यो समय युटुबमा अत्याधिक भाइरल भएको छ।उनले गाएको सबै गीतहरु भाइरल भए संगै उनि यो बेला राजधानी आएकी छिन।उनि राजधानी आए संगै पत्रकार ऋषि धमल र उनकी पत्नी एलिजाले अब उनले पढ्ने सबै खर्च आफुले बेहोर्ने जानकारी दिएकी छन।लालीगुराँस डटकममा कुराकानी गर्दै उनीहरुले सबै खर्च बेहोर्ने परतिबद्धता जायर गरेका छन।
पछिल्लो समय युटुब देखि समाजिक् संजाल सबैतिर भाइरल भएकी ११ बर्षीय बालिका कमला घिमिरे अन्तत इन्द्रेणीमा आउने भएकी छिन। अहिले उनलाई सर्बत्र खोजिरहेका छन दर्शकले।यो समय उनको खोजि हुदै गर्दा अब उनको गीत कस्तो होला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा उनले गाएको लाइव दोहरीमा अमिर्त सापकोटा पनि देखा परेका थिए । हेर्नुहोस को हुन् त् कमला घिमिरे र उनको केहि दोहरी गित झलक हरु ।